३० करोडकाे आइपीओ ल्याउन लागेकाे सानिमा जनरलको नाफा कति छ ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
३० करोडकाे आइपीओ ल्याउन लागेकाे सानिमा जनरलको नाफा कति छ ?
अर्थ संसार काठमाडाैं - सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चाैथाे त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार कम्पनीले चाैथाे त्रैमाससम्ममा ५ करोड ५६ लाख २९ हजार खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएकाे छ । उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षकाे तुलनामा ५३.४० प्रतिशत धेरै हाे । गत वर्षको यहि अवधीमा कम्पनीले ३ करोड ६२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएकाे थियाे ।
यसैगरी, चाैथाे त्रैमाससम्ममा कम्पनीले १३ करोड ५५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आम्दानी गरेकाे छ । उक्त रकम गत आर्थिक वर्षकाे तुलनामा ८१.३४ प्रतिशतले धेरै हाे । गत वर्ष कम्पनीले ७ करोड ४७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेकाे थियाे ।
कम्पनीकाे जीवन बिमा कोषको आकार पनि बढेर ५ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष कम्पनीकाे बिमा कोषमा २ करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ थियाे ।
त्यस्तै, कम्पनीकाे चुक्ता पूँजी ७० करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ ।
त्यसैगरी, कम्पनी लिमिटेडले ३० करोड रूपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नका लागि असार १४ गते आइतबार सेबाेनमा निवेदन पेश गरेकाे छ । उक्त आइपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले मध्यम अवस्था जनाउने केयर एनपीबीबीप्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
कम्पनी​ले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण यस प्रकारकाे छ :
DishHome ले Ipo निश्कासन गर्ने | शेयरधनीले राम्रो प्रतिफल पाउने |क्लिन फिड लागू हुँदा ग्राहक मारमा |
नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति कित्ता ? हेर्नुहोस्
अब खाद्य सामग्री अनलाइनबाट किनमेल गर्दा खल्ती वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिने !
बुधबार देशभर ११ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा कति थपिए ?
हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व सञ्चालक परे धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा !
शेयर बजारमा करेक्शन : बढेको बजारमा १ अर्ब ७० करोड
एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१ को खुद सम्पत्ति मूल्य बढ्यो
एनसेलले आजैबाट लागु हुनेगरी ल्यायो यस्तो अफर, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस्
एनआरएन लघुवित्तले तोक्यो बुकक्लोज मिति
प्रभु बैंकको “सहयात्रा समृद्दिको” कर्जा योजना शुभारम्भ
भर्ने होइन जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ ? (सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा)
हालै आइपिओ निष्कासन गरेको समाज लघुवित्त मर्जरमा जाने !
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा मुस्कान होम अफ होपलाई चेक हस्तान्तरण
यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स चौथो बर्षमा
अबदेखि कर तथा राजस्व इसेवाबाटै भुक्तानी गर्न सकिने !
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या ४२९ पुग्यो !
मंगलबार देशभर थप १ हजार ३५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा कति ?
नेप्सेमा २० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचीकृत !
२२.९१ अंकले घटेको शेयर बजारमा २ अर्ब ८१ करोडको कारोबार
मेरो शेयरमा पिन कोड कसरी सेट गर्ने ?
१ नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति कित्ता ? हेर्नुहोस्
२ अब खाद्य सामग्री अनलाइनबाट किनमेल गर्दा खल्ती वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिने !
३ बुधबार देशभर ११ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा कति थपिए ?
४ हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व सञ्चालक परे धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा !
५ शेयर बजारमा करेक्शन : बढेको बजारमा १ अर्ब ७० करोड
६ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१ को खुद सम्पत्ति मूल्य बढ्यो
७ एनसेलले आजैबाट लागु हुनेगरी ल्यायो यस्तो अफर, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस्
८ एनआरएन लघुवित्तले तोक्यो बुकक्लोज मिति
९ प्रभु बैंकको “सहयात्रा समृद्दिको” कर्जा योजना शुभारम्भ
१० भर्ने होइन जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ ? (सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा)